Xiaomi neinternet-off yavo brand Redmi vagara vachisimbisa kugona pamusoro pezvese zvinhu. Mukutora kwemakore mashanu-pamwe-gore muIndia, Xiaomi yakashandura zvakanyanya hushamwari hweindasitiri yemahara munyika. Iyi penchant yekuita kuti mafoni akwanise kudhura uye kuwanikwe kune vashandisi ichiri kupenya muchiono chekambani kunyangwe kukura kukuru pamwe nekufambiswa kwaanofarira. Kunyangwe kupesana nehukuru hwepamusoro hwaunopihwa nema Smartia aXiaomi, iyo POCO F1 yakamira sechinhu chinoshanda. Kunyangwe iyo yakanga isina kukwana, iyo POCO F1 yaive chiyedza chetariro kune vatengi vavhiringidzika nemitengo iri kuwedzera yeemahareji mafoni. Foni yakasangana nekudiwa kwakanyanya uye yakarongedzwa nekutevera kwakashingairira, uye kubva pakaburitswa, vashandisi vakadaidzira kune mumwe munhu ane hutengo hwakakwira hunodzidziswa. Ipo pocogi ichiri kuburitsa mutsivi kunyangwe mushure memwedzi gumi nemisere, iyo brand yazvino POOL X18 mukwikwidzi inogona kuwana chiitiko chimwe chete.
Kusiyana nePOKCO F1, iyo yaive yakanyanya kushanda pamusoro pefomu, iyo POCO X2 yakagadzirirwa kukwezva uye yakarongedzerwa nevaraidzo sezvazviri kuitirwa mutambo. Iko kugadzirisa kukuru kunogona kuoneka maererano nekamera, nekuda kweiyo itsva 64MP Sony sensor. Asi iyo pooco X2 inoenzanisa sei nePUKO F1 kana zvasvika pakuita, uye, zvakanaka, zvakaringana zvimwe zvinhu zvese? Tichave tichigadzirisa zvese izvo mune ino POCO X2 ongororo.
POCO X2 Foramu
Tenga POCO F1 paFlipkart (kutanga ₹ 15,999)
Tave neiyo 8GB / 256GB yakasiyana yePOTX X2, iyo yaikweretwa kwatiri kwemazuva mana isati yatanga kuIndia. Heano kuongorora kwedu kwePOTO X4 mushure memwedzi ingangoshandiswa.
POCO X2 Matauro
POCO X2 kutaurwa
X X 165.3 76.6 8.79 mamirimita
120Hz yakakwirira yekuzorodza mwero
Punch-gomba kuratidza pamwe maviri maviri pamberi kamera
Hybrid SIM slot ye microSD kadhi
4,500 naRaama matochi
Qualcomm Kurumidza Kura 4.0+ rutsigiro
Pamberi Ikamera Mufananidzo:
Kutanga: 64MP Sony IMX686 sensor, f / 1.9, 1 / 1.7 ”sensor
Sekondari: 8MP 120 ° Yakadzika-Angle Kamera, f / 2.2
Chikoro chepamusoro: 2MP, f / 2.4, Kudzika Sensor
Quaternary: 2MP, Macro ine autofocus, f / 2.4
Ultra-yakafara: 1080p @ 30fps
Kunonoka-kufamba: 1080p @ 120fps, 720p @ 960fps
Kutanga: 20MP, f / 2.2
Sekondari: 2MP yakadzika sensor
Rutivi zvigunwe scanner
Android Version MIUI 11 yakavakirwa paApple 10
Iyo POCO X2 yakakora uye chunky uye mavara ayo akawandisa anoikweretesa yakashinga chitarisiko. Huru yefoni haina chirevo: kurema kwacho kunotyora iwo 200g mucherechedzo, ichiita kuti foni isafare kune vashandisi vane maoko madiki akafanana neyangu. Uku pfungwa yekusagadzikana yagara neni kubva zvangu kutanga kutaridzika kwePRCO X2. Manzwiro aunoita pamusoro pehuremu hwe smartphone zvinouya pasi pakuda kwako, saka vamwe vashandisi vanozvisanganisa nekusagadzikana, vamwe vanozviona sekupa kurongeka uye kusimba. Kune avo vangangopedza chikamu chikuru chenguva yavo vachitamba pane iyo itsva PAKO X2, chitsitsinho chinogona kunge chiri nzvimbo yekurwadziwa.
POCO ikozvino chaita mhando yakazvimiririra, asi kushamwaridzana kwayo neXiaomi neRedmi hakugone kutswa. Iyo POCO X2 pachayo iri mhedzisiro yekutsigirwa kwaXiaomi zvekuti iyo POCO X2 ndiyo chinhu chakafanana neayo Redmi K30 4G kuChina, sezvandinoona mune yangu kutanga kutaridzika kwePRCO X2. Posco yenyaya yenyaya ndeyekuti zvikwata zvinobva kuRedmi nePCO zvakanyatsogadzira chishandiso, uye nekudaro, vanogovana zvirevo kune yekutanga dhizaini. Sezvinobvumwa, iyo Redmi K30 5G ine kutarisirwa kukuru kwaRedmi kuChina: haingori chete iyo inotsigira 5G, asiwo mutambo weiyo mutsva uye ane simba Qualcomm Snapdragon 765G mobile platform. Zvichakadaro, iyo POCO X2 inongogumira kuIndia pari zvino, uko kunyangwe miedzo nekugoverwa kwe5G kuchiri kutanga, uye iyi geji inobatsira musika mukuru wePUKco nyowani.
Iyo POCO X2 inotora imwe nzira kubva kune yakasimbisirwa-yakatungamirwa POCO F1 kana zvasvika pakugadzira. Iyo inopenya inopedza pane ese matatu eavara mavara anowanikwa uye achikumbira kutarisisa. Iyo girazi kumashure inorongedza holographic dhizaini uye zvinoenderana nemaitiro aunotarira nawo, maitiro ayo ekushandura anochinja. Kana ichitarisa zvakananga, kumashure inoratidzika kunge inoratidzika uye yakatsvuka asi kana ichitarisa pakona yeinosvika makumi matatu nemakumi matatu kubva panhurikidzwa, inopa kunyepa kwevhu rakanyarara uye rakanyarara. Kunze kwegirazi rekuseri kwepaneru, iyo huru kamera bump yakatenderedza denderedzwa - ine convex girazi kumusoro - zvakare inokwevera kutarisa kwako. Pakumuungana munharaunda, izvi zvinhu, kunyanya denderedzwa, zvinogona kuisa mudziyo wako munzvimbo yakatarwa, chaizvo. Izvi zvinokonzeresa nedenderedzwa rechitenderedzwa kuratidza marobhoti zvakanyanya. Chikwapuro-chimiro chetambo mukati meye kamera bump zvakare chinoratidza mwenje nenzira imwechete sedenderedzwa rakatenderedzwa. Girazi rekuseri, kungofanana nekuratidzira, rakachengetedzwa neGorilla Girazi 30.
Mukufunga kwangu kwekutanga kwePUKO X2, ndakacherekedza bhatani uye portfolio kuiswa pane iyo smartphone. Nenzira inoshamisa, iyo-yakasungirirwa zvigunwe zvigunwe scanner yakadzora kutarisisa kwandakaita kurongedzero yefoni. Sechikwata chePUKO, parutivi rwe smartphone nzvimbo inowanikwa nyore nyore yemunwe wemasaini scanas kune yekushure, kunyanya kune yakafara mudziyo wakafanana nePUKO X2. Kunyangwe ini ndisingakwanise kupokana nekureruka kunopihwa necheni-yakavakirwa padanho rekutarisa muviri, ndakasangana nedambudziko rekujaira kukwira bhatani. Kusiyana neyekuburitsa rocker, inova mamirimita mashoma pamusoro pechimiro, iyo bhatani simba bhatani rinonzwa sekunge richangobhururuka neusoji, ichida imwe kuti inyore zvakanyanya simba kumanikidza bhatani. Kana iwe uchida kudzivisa izvozvo, MIUI yePOTO inokupa zvakare sarudzo yekuvhura iyo foni nekubata bhatani chete (seyakajairwa / yakajairwa / / yakajairika boka reva capacitive zvigunwe zvigunwe) asi mune rangu ruzivo, izvo zvakakonzera kusavhurwa kusingadiwe kubvira chigunwe changu chekurudyi chinongozorora pamusoro chaipo pegunwe rekutarisa chigunwe. Nguva yangu nefoni yakaparurwa nokuzvidira pakati pekushandisa nzira mbiri dzakasiyana dzekuvhura. Kunyangwe kushandisa foni kwemavhiki mashoma ikozvino, kuvhura foni nerwemunwe uchiri kunzwa senge dambudziko.
Panzvimbo pekunyatsoita, kuiswa kweimwe chigunwe scanner chaipo pasi pechisikirwo nzvimbo yekuzorora yechigunwe kunoita kuti kuve kusingafadzi kwekushandiswa kwakajairika. Saka, ini ndainyanya kuvimba nesoftware kusunungurwa ndichishandisa foni. Nehurombo, sezvo Poco yaive nechivimbo nekuiswa kwayo chigunwe chekupinda chigunwe paPUKO X2, ivo vakabvisa iyo IR-yakavandudzwa kumeso yekuvhura mechanism kubva kuPOTF F1 iyo yakashanda zvakaenzana zvakare husiku sezvayakaita masikati. Iyo iripo yekuvhura kumeso system haina kushanda zvakanaka isina kukwana mwenje, saka haina kunyatsovimbika, nekudaro ichimanikidza iwe kuti udzokere zvichitsamira pachigunwe chekuongorora. Iko kune chaiyo yekudzidzira curve neinodzika-yakaiswa chigunwe chigunwe scanner, asi iyi yekufunda curve haina kukwirira seyakafanana neyakavharidzirwa yekumashure-yakaiswa capacitive kana mu-kuratidza yeanoratidzira zvigunwe zvigunwe.
Kutaura zvine hunyanzvi, girandi sandwich dhizaini ingaite iyo Poo X2 kuve yakawandisa, asi zvakare inoitisa kuti ive yakawanda uye yekutarisisa kupfuura iyo POCO F1. Kusiyana neF1, parizvino hapana ruzivo rwakasimba nezve chero zviitiko kana ganda kubva brand. Kana iwe uchida kuchengetedza iyo poco X2 pasina kuvanza dhizaini yayo yakanaka, unogona kusarudza iyo Ringke Fusion-X kesi. Neimwe nzira, kana iwe uchida kudzivirirwa zvachose pasina kunetseka zvakanyanya pamusoro pekuti yakawanda sei yekugadzira kumashure inoonekwa, iyo KAPAVER Rugged nyaya inogona kunge yakakodzera. Dzose dziri mbiri nyaya idzi dzinonzi dzakadonha dzinoedzwa kupokana nemauto ehondo.
Icho chinoratidzwa pane iyo POCO X2 yakakura. Iyo inosvika 6.67 inches magonally uye ine resolution ye 2400 x 1080 pixels, zvichikonzera chikamu chikamu che20: 9. Nekuda kwetsoka yakakura, iyo pixel density ye skrini inotenderera 386ppi, iyo yakaderera kupfuura iyo 400-plus kukosha yakazvirumbidza nevazhinji vanokwikwidza. Iyo yekuratidzira tekinoroji ndeye LCD uye izvi zvinoguma mukusiyana kwakasiyana uye kwakazara makara seiko kufananidzwa ne AMOLED kuratidza mapaneru.
POCO inoti iyo Posco X2 inoratidzira inosvika nekupenya kwakanyanya kwemazana mashanu emakumi mashanu, iyo ichiri 500nits (~ 100%) yakaderera pane yakataurwa yepamusoro pekukosha kweRedmi K17 / K20 Pro's AMOLED kuratidzwa. Panyaya yekugadziriswa kwemavara, iyo inoratidzira inovhara 20% yeNTSC ruvara rwe gamut. Iwe unogona kusarudza yakawedzera kuzadza colour profile kubva paMIUI yekuratidzira marongero, asi icharamba ichidonha pane AMOLED kuratidzwa.
Iyo Gorilla Girazi 5 inoita kuti iratidzike zvikuru, uye neyakajeka kunyange kunze, inogona kukupa imwe dambudziko pasi pechiedza chakatwasuka kana chezuva.
Kudzidza kubva pazvikanganiso zvayo zvekare, POCO yakaregedzera iyo POCO X2 rezenisi reWidevine L1 yekutamba kumashure zviri mu DRM mumapurogiramu akafanana neNetflix, Amazon Prime, nezvimwe. gamuchira Widevine L1 kuburikidza neOTA, foni yakanga isati ichitsigira kutamba kweHD muNetflix. Mune chibvumirano, iyo POCO X2 inotsigira Yakazara HD vhidhiyo kutamba muNetflix uye Amazon Prime Vhidhiyo. Pamusoro pezvo, iyo inoratidzirwa inosimbiswa yeHDR10 sezvakangoitwa neFOCO F1, uye izvi zvinoguma nekusiyanisa zviri nani uchiona HDR yezvinhu muAmerican Prime Video. Iyo POCO X2 haitsigire HDR zvirimo muNetflix, asi pamutengo uyu, ndiyo dhirowa yatinogona kurarama nayo.
Nechekuita, iyo LCD iri paPSO X2 inogona kunge isingaiti zvakanaka seOLED inoratidza, asi inomiririra shanduko huru pamusoro pePUKO F1. Iyo mavara uye kupenya kwekuratidzira vanonzwa yakawanda kwazvo yunifomu, uye nyaya dzekubuda ropa dzakanyatsoderedzwa. Kupfuurirazve, hapana chero mweya wegonyeti yekubata iyo yakabata vamwe vashandisi pane iyo POCO F1. Nekudaro, iyo yakakurumbira yemunwe-yemunwe-skrini bug ichiri yakanyanya kuvapo kunyangwe mushure meviri iterations yeMIUI. Kana iwe uchidhonza minwe mitatu pasi pechiso kuti utore skrini, iyo skrini inoramba ichinyoresa kubata kweimwe chigunwe kunyangwe mushure mekusimudza minwe yese mitatu kumusoro uyezve resets chete mushure mekubata skrini zvakare. Izvi zvinowanzonzi "ghost kubata." Kunyange izvi zvisingafungire kukanganisa kwako kushandiswa kwezuva nezuva zvakanyanya, inogona kunge iri pet peeve yevatambi vakakomba.
Paunenge uchiona mavara akajeka, chiratidziro chine tembiricha yokushisa tembiricha. Nekudaro, iwe unogona kuona kumwe kusiyanisa kana uchiona rima zvinhu. Cherechedza kuti kusiyanisa kwekushisa kwemavara hakusi kwakanyanya sekuonekwa mumifananidzo iri pamusoro: vanotorwa nenguva dzekuwonekera dzakaiswa kune angangoita masekondi matatu. Mune iyo mifananidzo, iwe unogona kucherechedzawo kuti nepo mbiri-gomba punch ichiita senge imwe yekucheka, iyo, ichokwadi, inosanganisira maviri akapararira maburi kune imwe neimwe kamera yekumberi.
Iwe unogona kunyange kuseta iyo yekucheka chimiro kune maviri maburi pachinzvimbo chimwe nekuisa iyo "Diki diki upamhi" kubva kune Mushandisi sarudzo kusvika 381dpi paRedmi K30. Nekudaro, iyi tekinoroji haishande paPUKO X2 uye isu tave kutotarisa chero imwe workaround. Vhidhiyo iri pasi apa inoratidza kuti iyo POCO X2 inopindura sei shanduko yeiyo "Diki diki upamhi" kukosha.
Sezvinoratidzwa nevhidhiyo, unogona kushandura kumashure mamiriro eiyo bharari kuita dema kana kudzima nzvimbo zvachose kuita kuti gomba punch cutout rinyatsooneka. Sezvo ichi chisiri AMOLED kuratidzwa, chikamu chakasviba chew skrini chiri kutaridzika kuoneka.
Chikonzero chikuru POCO yakasarudza LCD pamusoro pe AMOLED iri zvekuti iite kuti vashandisi vafarire zororo re 120Hz panguva ino yemutengo. Sezvo chiratidziro ichizorodza chinguva zana nesekondi rega rega (kureva. Yega 120ms), chinonzwa chakati kwati kwati kwati pane chekisheni 8.3Hz chiratidziro icho chinotora kaviri nguva yakawanda (~ 60ms) kuzorodza. Mukushandiswa kwemazuva-zuva, mifananidzo kana kupuratificha pachiratidziro chine zororo rezvino 16.7Hz yaizoratidzika zvakanyanya kunyorova kana ichienzaniswa neye pane 120Hz kuratidzwa. Nzvimbo dzakakwirira dzekuzorodza dzave kutengesa mapoinzi evanogadzira desktop vagadziri kwemakore akati uye inonyanya kunangwa kuvatambi. Ne PoCO X60, kambani inoitawo chinangwa chekutarisa vashandisi zvakakomba nezve smartphone yemitambo. Zviripachena, iyo 2Hz LCD pane ine hupfumi hwakawanda kupfuura iyo 120Hz AMOLED kana Super AMOLED (sezvazvinoonekwa pa OnePlus 7 Pro/7T/7T Pro, Realme X2 Pro, Pixel 4, Xiaomi Mi 10 mutserendende, nezvimwe.) kana kuti 120Hz Super AMOLED (iripo pane ASUS ROG Runhare II uye Samsung Galaxy S20 rutsva).
Kuti unyatso shandisa iyo 120Hz yekuzorodza chiyero, foni inofanira kunge ine simba zvakakwana kuti ipe maapplication pa120fps. Izvi hazvirevi chete pane maapuro ivo pachavo asiwo paCPU, iyo GPU, iyo Display processor, uye sevhisi ye Android inonzi DisplayFlinger. Kunyangwe kana iyo SoC ine simba zvakakwana kuti inyatso kugadzirisa zvemukati nekukasira kupa rwizi rwakatsiga rwemapuranga anofanirwa kupiwa kune yekuratidzwa, haasi ese madhivhisi akagadziridzwa kuita icho chinodiwa zvizere Kana mwero pakashandurwa mapuranga wakaderera kupfuura 120fps, iwe unosungirwa kuona jitter (kana jank) pane chinoratidzwa, uye izvi zvinoshatisa chako chiitiko chekuona. Uyezve, kusiyana nedesktop yekuratidzira, kuratidzwa kwe smartphone hakukwanisi kuzvishongedza yega zororo rekuenzanisa chiyero chechimiro chechinyorwa (ichi chivakwa chinodaidzwa kuti V-Sync) uye izvi zvinowedzera mukana wavo wekusagadzikana.
POCO zvisina kukodzera yakatora sarudzo yekuda nekuunza 120Hz kuratidzira pane kuenda kune 90Hz. Kazhinji, smartphone ine mureza wekudyara, senge ASUS ROG Nhare II kana Galaxy S20 matatu, anga asina nyaya dzinopa zviri mukati nekukurumidza, asi Snapdragon 730G inogona kunzwa isina kukwana pane dzimwe nguva. Ndakasangana ne lag kana jitter pachiratidziro, kunyanya ndichitakura nzvimbo dzinorema muGoogle Chrome browser kana ndichipuruzira chikafu mumapurogiramu enhau en Instagram, Facebook, kana Snapchat. Iyo jank inova inonyanya kuoneka kana iwe uchitsvaira kuruboshwe kana kurudyi pane izvi zvishandiso kuenda kune chimwe chikamu cheapp. Neraki, iyo POCO X2 inotsigirawo mitambo yekutamba inosvika zana nematanhatu, uye nepo rondedzero yemitambo yakatsigirwa iri pfupi pfupi (kunyangwe ipfupi pane iyo rondedzero inoratidzwa pachiitiko chekutanga), isu tinotarisira kuti chiitiko ichi chingafadza vatambi vemitambo. Ini ndinokurukura nezve POCO X120 kugona kwekugadzira iyo yakafanana mafrigirate apo uchitamba mumutambo chikamu.
Iko 120Hz kuiswa kunotungamira mukushandiswa kwakanyanya kwebhetri, saka POCO yakawedzera sarudzo yekudzosera kumashure ku60Hz. Iyo yekuzorodza mwero inowira back to 60Hz mu bhatiri saver mode. Kana iwe uchichinjira ku60Hz, shanduko yacho inonzwa pakarepo, asi kana iwe ukaramba uchishandisa foni kwemaminitsi mashoma, kudzokera ku 60Hz kuzorora kunomira kukunetsa. Kwandiri, iyo 120Hz (kana kunyange 90Hz) zororo rekuvandudza iri zvakanyanya kuhupfumi kupfuura chinodiwa.
Kana iri yekuita kwayo kwese kwekuratidzwa, inopenya uye yakakomberedza zvakakwana kuti ishandiswe mukati asi inogona kukuchengeta iwe uchikumbira zvimwe pasi pezuva. Kana nharembozha yako yazvino ichiita LCD uye iwe uchinge wakamira nekuomerera neLCDs nekuda kwenzvimbo yepamusoro yekuzorodza, saka kusarudza iyo POCO X2 haisi yekurapa. Zvakare, iyo nzvimbo yakakura inoitawo online mavhidhiyo ekuona zvakanyanya kuita uye kuvaraidza. Iyo inoratidzira inogona kunge isingakwanise kupa iyo yakafanana mhando se AMOLED kuratidza, asi kana iwe uri kuronga kutenga foni kunyanya yekutamba, chiratidziro ichi chinokushandira iwe zvakanaka. Chekupedzisira, 120Hz chinhu chakakosha uye chinofanirwa kutarisira neruzhinji mamwe mabasa nemitambo mune ramangwana. Panguva ino, Redmi zvakare kuyedza nzira ye144Hz yechiratidziro, uye isu tingaone icho kana pamwe kuratidzwa kwakawedzera mod nenyasha dzenharaunda yekuvandudza pano paXDA.
Iyo PoCO X2, kungofanana ne4G Redmi K30, inogadzwa Qualcomm's Snapdragon 730G nharembozha. Ichi chiziviso chaive chidiki chekudzikisira pasi kune vateveri vaive vakatarisira mureza weku processor mufoni yechipiri yePoobi, kungofanana neQualcomm Snapdragon 845 pane iyo POCO F1. Zviripachena, iyo POCO X2 ndeye chikamu chakawanda-chakatemerwa bhajeti uye haisi iyo inomutsigira wechokwadi wePOTCO F1. POCO ine chinangwa chekutanga mamwe epamuzhinji madhenari (netariro iri Poo F2), asi hapana ruzivo rwakasimba rwekudzosera kuvapo kwarwo. Tichifunga nezvemutengo, iyo Snapdragon 730G ndiyo imwe yedzakanakisa yepakati-sosi SoC sarudzo inowanikwa mumusika. Iyo disix G inoreva kuti iyo Snapdragon 730G yakagadzirirwa mutambo. Kunyange iyo SoC inenge yakafanana neiyo Snapdragon 730, inouya nemazita ari nani echiito chekuonga nekuda kweiyo yakawedzera GPU. Mwedzi wapfuura, isu akaongorora iyo Realme X2, iyo inouyawo neyechete chipset uye saka inotarisirwa kuve yakafanana kuita.
Mukushandisa chaiko-kwehupenyu, iyo Snapdragon 730G mutambi ane hunyanzvi uye anogona kubata mazhinji mabasa nemitambo zvakapusa. Sezvinorongerwa, inogona kubata mazhinji emitambo zviri nyore, kunyangwe ichiita kupisa mukati mekushandiswa kwenguva refu. Iyo POCO X2 inouya neyemvura-yakatonhorera vapor kamuri iyo inobatsira kupisa kuputika nekufambisa kupisa kune yakadzika chikamu chefoni. Polycarbonate epurasitiki inonyatsoisa mukati kupisa kupfuura girazi, saka kupisa kubva mukati mefoni kunonzwisisika kunzwika kumusoro kana uchienzaniswa nefoni ine mapurasitiki epurasitiki. Nepo izvi zvichireva kuti iwe uchanzwika kupisa kwakawanda, kupisa kuchapenyesawo kunharaunda - uye kuita kuti foni itonhorese - zvakanyanya nekukurumidza kupfuura ipurasitiki.
POCO X2 Benchmark Zvikoro
Yangu POCO X2 yekuongorora unit ine 8GB ye RAM uye 256GB yeUFS 2.1 chengetedzo. Mhedzisiro yemabhenji ekugadzira pazasi akaita seyakanongedzwa. Kunze kweizvi, iyo smartphone inouya mune 6GB / 64GB uye 6GB / 128GB masisitimu, uye yavo inoenderana mabhenji alama anogona kuve akaderera. Kuti uenzanise, ndichave ndichiisa iyo Poco X2 inopesana neReime X2, Redmi Note 8 Pro, uye Redmi K20 (inozivikanwawo seXiaomi Mi 9T) sezvo mafoni aya ese ari mutengo pasi pemadhora mazana matatu uye anofanirwa kufadza vashandisi avo kuda kuita kukuru. Kune maminetsi mashoma ekuenzanisa: iyo CPU pane Snapdragon 300 SoC inoratidzira Kryo 845 cores yakavakirwa pane ARM's Cortex-A385 uye A75 yakarongedzwa mune 55 + 4 kurongedza ne 4GHz uye 2.8GHz maerekitita ekuita uye iyo ine simba-cores cores , zvichiteerana, nepo Snapdragon 1.7G ichishandisa nyowani Kryo 730 cores. Snapdragon 470 yakavakirwa pane yakaitwa 845nm yekugadzira zvakare.
4 x Kryo 385 Goridhe yakavakirwa paArm Cortex-A75 @ 2.8 GHz
4 x Kryo 385 sirivhi yakavakirwa paArm Cortex-A55 @ 1.76GHz
GPU Adreno 630 @ anosvika 710MHz Adreno 618 @ 575MHz Mali G76 MP4 @ 800MHz
Geek Bhenji 5
Kutanga neGeekbench 5 zviyero, iyo isina-musimboti uye yakawanda-musimboti zvikero zvePOTX X2 yakafanana chaizvo neRedmi K20 (Xiaomi Mi 9T) pamwe neReal X2 nekuti ese matatu ane akafanana CPU. Iyo Redmi Cherechedzo 8 Pro inosara kumashure mune mbiri yekuenzanisa uye inonakidza zvakadaro nePOTF F1 ine Snapdragon 845 nharembozha yavo. Kunyange iyo Snapdragon 845 yaive mureza wepuratifomu muna 2018, iyo inodzokera kune angangoita gore risati raitwa Snapdragon 730 / 730G. Snapdragon 845 yakavakirwa yekare Kyro 385 cores uye inogadzirwa ichishandisa 10nm maitiro ayo asingaite zvakanyanya kupfuura iyo 8nm inowanikwa maitiro ekugadzira anoshandiswa kugadzira Snapdragon 730G.
Kuenderera mberi kuenda kuAnTuTu v8, iyo POCO X2 uye iyo Realme X2 inobuditsa mienzaniso mhedzisiro uye zvese zviri zviviri izvi zviri kumashure kweRedmi Note 8 Pro, iyo inowana zviri nani maererano nekuyeuka uye UX. Nekusajeka, iyo yakakwira frequency yeMali G76 GPU paMediaTek Helio G90T ichisimbisa iyo Redmi Note 8 Pro inobatsira iyo kupa zviri nani GPU kuita.
PCMark Shanda 2.0
Tevere kumusoro, muPCMark Work 2.0 scores, iyo Poo X2 inodarika iyo POCO F1 mune bvunzo dzese. Mukufananidza neRenme X2, iyo poo X2 ine huwandu hwepamusoro uye ine mhedzisiro iri nani mumatanhatu kubva pamashanu ebvunzo. Zvese zvishandiso izvi zvinosara kumashure kweRedmi Cherechedzo 8 Pro, iyo yakaputsa 10,000-point chiratidzo mukati Kuongorora kwaArol kwefoni. Nekudaro, sezvo iyo POCO X2 neRedmi Note 8 Pro vaine musiyano weangori mazana matatu ezviuru, ivo vachave nekufanana muchiitiko mumabasa echiitiko ekushambadzira ayo PCMark inotevedzera.
Ini ndakanga ndisingakwanise kumhanyisa mabhenji maviri akakurumbira eGPU - 3DMark uye GFXBench - sezvo iyo POCO X2 yakaramba ichikanda kukanganisa kusinganzwisisike muzvose zviri zviviri, izvo zvatisingakwanise kugadzirisa.
GFXBench Benchmark (Mahara, Google Play) →
Chekupedzisira, isu tinoshandisa AndroBench kuyera kuti kuchengetedza kwakadii pane imwe yeidzi michina. Kunyanya, ese aya anouya neUFS 2.1 NAND yekuchengetedza machipisi. Sezvinotarisirwa, dzese dzedzimwe mafoni kunze kwePOTCO F1 dzine zvakafanana uye dzinomhanya kuverenga. Zvichakadaro, mbiri-chiteshi danho rekutsigira rutsigiro mu Snapdragon 800 akatevedzana machipisi inobvumira iyo POCO F1 kuve neakakwira akatevedzana kuverenga kumhanya sekufananidzwa nevamwe. Kupfuurirazve, zvese zviri zviviri zvishandiso zvePUKO zvinotungamira maererano neanoteedzana kunyora kumhanya apo iyo poco X2 ine yakanyanya kusarudzika yekunyora kumhanya kweboka.
Kuita kwepamusoro kunoitawo kuti smartphone iwedzere kupiswa. Nekudaro, kudzivirira chero chinhu chinokuvadza nekuda kwekunyanyisa, makambani e-smartphone anowanzo shandisa algorithms kukurudzira kana kudzora mashandiro efoni nekukwira kwekushisa kwemukati. Iyo POCO X2 inouyawo neyemukati-inotonhora yekupfumisa kamuri yekuparadza kupisa kuri kupihwa neiyo SoC. Kuedza kunyatsoita kwekushisa kwekushisa uye POCO X2 yekupisa simba, ndakashandisa app inonzi CPU Throttling Test, iyo inoshandisa imwe-tambo uye yakavanzika-yeti tambo bhenji bhenji yakanyorwa muC uye Java. Mhedzisiro inotevera yakaitika apo foni yakanga yakagara isina kuita uye nefoni ichiri kudairwa.
Zvinoshamisa kuti iyo POCO X2 yakaratidza kuwanda kwekukanda mumatare ese ari maviri. Nekufamba kwenguva, kudzikira kwekuita kunoonekwa. Mushure megumi nemaminetsi-akareba bvunzo, iyo CPU performance inowanikwa yakwira kusvika makumi masere neshanu muzana pagore rekuita. Paunenge uchibhadhara, basa repamusoro rakatoderedzwa negumi nemasere%, uye pamusoro peizvozvo, iyo CPU inodhonzwa kusvika 15% yekuita kwepamusoro pechirongwa. Paunenge uchiisa izvi pamwe chete, iko kushanda kunoitwa zvakanaka kwakapeteredzwa kusvika makumi manomwe nenomwe muzana yechiverengero chekuita pasina kubhadharisa. Izvi zvinoratidza kuti POCO X83 inodonha mukuita painenge ichipisa. Mukupesana, iyo Realme X18 yakaratidza pachena chero chiratidzo chekudzora kana iyo bvunzo imwechete yaishandiswa kuyedza kutambisa pafoni iyo.
Kana zvasvika pamitambo, iyo POCO X2 yakanyatsogadzirirwa. Qualcomm inonongedza Snapdragon 730G senge iri sub-mureza processor uye iyo POCO X2 inounza nemutengo wakaderera pakati pezvizivikanwa zvigadzirwa. Imwe yemabhenefiti iyo iyo Poo X2 ine pamusoro pevari kukwikwidza mumutengo uyu mutengo ndeye 120Hz yekuvandudza mwero wekuratidzira, izvo zvinoreva kuti iwe uchave uchakwanisa kutamba mimwe mitambo kusvika kuma 120fps. Parizvino, mashoma emitambo chete anotsigira zana nemakumi mairi gameplay parunhare. Ini ndakatamba yega yega inotevera mitambo kweinenge maminetsi gumi nemashanu kuti ndiedze kuti inongoratidzika sei iyo POCO X120 inobvumira kutamba mitambo pamusoro pe15fps Kuita kwacho kwakayerwa uchishandisa MutamboBench Pro, chishandiso chinokutendera iwe kuti ubheje chiratidzo chaicho-chenyika yepasirese mutambo.
GameBench Pro [Akaunti Inodikanwa] (Mahara, Google Play) →
Cherekedza kuti iyi yese mitambo yairidzwa neMIUI yakavakirwa-mumutambo mutambo inowaniswa.
Dead Remake 2
Kutanga kure neyechipiri zombie apocalypse mutambo muakafa Trigger mitezo, POCO X2 inopa mupatanuri we 114fps. Iyo chiyero chiyero yaive zvakanyanya pamusoro pe 100fps mucherechedzo panguva yemutambo asi yakadonha zvakanyanya panguva yekucheka zvirahwe uye kurodha zvigadziriso, zvichikonzera iyo musiyano index ye7.13fps. Iyo yakawanda yeiyo chiyero chechimiro chinodonha paunenge uchitamba chinogona kucherechedzwa kana zombie ichiswedera padyo uye inotanga kurwisa iwe kana pane kamwe kamwe shanduko yemashure. Sezvo mutambo wacho usiri kudiwa zvakanyanya maererano nekushandiswa kweGPU, iyo FPS inofamba pamusoro peiyo 100fps chiratidzo nguva dzose.
KUFA ZVINOKOSHA 2 - Zombie Survival Shooter FPS (Yemahara +, Google Play) →
Hitman Go ndiyo yebhodi mutambo mutambo weiyo yakasarudzika zita rinotenderera pamusoro pehupenyu hwechiurawa chakaurawa, chinozivikanwa seAgent 47. Mutambo uyu zororo kubva pamhirizhonga wenguva dzose uye hutsinye uye unopa zvakanyatsonaka mutambo wePEMCO X2. Iyo chiyero chiyero inochengetwa zvakapoteredza 115fps munzvimbo dzese uye inodonha kusvika panosvika 85fps pakukanda zviyero. Sezvo mamisheni mumutambo ari mashoma, kusimba kweFPS kungori 78%, asi murevuri we116fps anoratidza kuti POCO X2 ingamhanya sei mutambo. Iko hakuna yakakura furu kudonhedza uchitamba mutambo.
Dub Dash ndiyo inonakidza mutambo uye iwe unofanirwa kudzora vhiri uye kuibvisa kubva pane zvipingamupinyi uchitenderera pamusoro pechitenderera nzvimbo. Iyo mafambiro akagadzirirwa kununura zvipingamupinyi anoshongedzwa zvakanaka netseti dzemabheti emagetsi akaunzwa mukati meiyo mutambo wemitambo. Pa PoCO X2, Dub Dash yakashanda nesimba uye nyore kugadzira fomati yakaenzana ye115fps. Mutambo, zvisinei, une ads zvinomhanya pa30fps, zvichikonzera iyo FPS yakagadzikana kudonha nemutambo wega wega pamusoro.
Dub Dash (Mahara, + Google Play) →
Warslands yakafanana neshanduro yeinternet yemauto ehondo epamhepo asi pachinzvimbo cheye wechitatu-munhu maonero, iwe unowana iyo angani inotaridzika inoita kuti ive yakaoma uye nekudaro, ichinyanya kubatikana. Ndichiri kutamba mutambo uyu paPUKO X2, inotanga neyakavhurwa FPS inenge 105fps. Asi nekufamba kwenguva kwemutambo, sezvo nzvimbo yakachengetedzeka inowedzera kudiki uye idiki uye mukwikwidzi unowedzera kuomarara, chiyero chechimiro chinodonha kusvika panosvika 70fps. Nekudaro, kunyangwe paine kutanga kwakanaka, iyo yepakati svomhu chiyero chingori 87fps nepo kusimba kweFPS kuri 67% chete.
Battlelands Royale (Mahara, + Google Play)
Alto's Adventure pamwe ndiyo yakareruka mutambo pakati pevese vakanyorwa pano. Nechikonzero ichochi, iyo POCO X2 inogona kubuda isingachinjiki - uye yakanyanya pakati pemitambo yese yakaedzwa - chiyero chiyero nehuremu hwe119fps uye kusimba kweFPS ye96%. Iyo chete furu madonhwe inoonekwa apo Alto anowira pasi pechando bhora uye mutambo unotevera uri kutakurwa.
Alto's Adventure (Yemahara +, Google Play) →
Kunyanya, nepo Alto's Odyssey iri kutarisirwa zvakare kumhanya pa120fffps, mutambo hauna kumhanya wakapfuura 60fps.
Muna Lara Croft Go, protagonist kubva yekirasi yakatevedzana Tomb Raider anoita nzira yake nenzira dzakateerana zvipingamupinyi, uye iwe unofanirwa kumutungamira mukutora-nhanho-nhanho kufamba uku zvese izvi zvichiratidzwa kubva pane isometric maonero. Kunyangwe iine pfungwa yakafanana kuHitman GO, huwandu hweruzivo rwunoita kuti mutambo wacho udiwa zvikuru - uye izvi zvinoratidza nguva ichitamba paPCAX2. Kubvira pakutanga, chiyero chemufambo chinogara chakaderera - kutenderedza 90-95fps - uye chinongodonhedza pamusoro pekosi yemutambo. Nekufamba kwenguva, chiyero chechimiro chinoburukira panosvika makumi masere nemakumi masere neshanu - icho chisiri chakashata asi chisina kunaka sezvakaita mimwe mitambo yakareruka pamusoro apa.
Kana iwe wakambotamba League of Legends paPC kana Arena yeValor parunhare, iwe uchaona Vainglory yakafanana chaizvo. Kwete izvozvo chete, mutambo wacho unooneka zvinomutsa kwazvo, uyo unoita kuti ubatidze - uye nekudaro, zvakajeka kuda. Paunenge uchitsvaga kuburikidza nemenyu yemenyu, iyo POCO X2 inogona nyore kuwana zviyero mu ballpark ye 115fps. Nekudaro, mukati memutambo chaiye, chiyero chemufambo chinofamba pakati pe 85fps ne100fps. Mukufamba kwemutambo we 5v5, chiyero chefreyimu chinodonha zvishoma nezvishoma sezvo foni inotanga kupisa. Maminitsi gumi mumutambo, chiyero chechimiro chinonyura pasi pe10fps uye pakupedzisira inowira pasi kusvika 80fps pakupera. Nekuda kweizvozvo, iyo FPS yekugadzikana kukosha inongova iyo 60%. Zvakare, kune akakosha furu anodonha apo yakawanda allies uye vavengi vari kurwa pamwe nekupedzisira mafambiro. Nekusajeka, foni zvakare inopisa zvakanyanya mushure mekurwiswa kwe71v5 chikamu chinogona kusvika kusvika makumi maviri nemashanu emaminetsi.
Vainglory (Mahara, + Google Play) →
Chisarudzo chakanaka chemutambo
Iyo poco X2 yakanaka yakawanda inogara kune hype yayo kana zvasvika kune zvemitambo. Iyo inogona kutamba mamwe mazita anooneka anokurudzira ane yakakwirira furemu mitero ukuwo uchigona kurega iwe uchitamba zvinonyanya kuzivikanwa mazita seCOD Nhare, Asphalt 9, PUBG Mobile, nezvimwewo pakukwiridzwa kunze kwemifananidzo. Isu tinotarisira kuona zvimwe zvingasarudzika 120fps mune ramangwana, uye vanhu vanotenga iyo poco X2 parizvino vachanakidzwa nesarudzo yavo. Kusvika panguva iyoyo, ivo vanogona kuramba vachizvikudza pamusoro pehupenyu hwakagadzikana uye kupenya iyo foni iri kukwanisa.
Pakati pemakona makuru ekugadziridzwa pane iyo POCO X2 pamusoro pePOCO F1 ndiyo itsva Quad-kamera setup kumashure uye maviri maviri maviri kamera kamera kumberi. Iyo yekumisikidza kumusana ndeyekuwedzera kwakakosha sezvo ichi ndicho chimwe chekutanga Smartphones kuve neyayo 64MP Sony IMX686 sensor. Iine sensor saizi ye1 / 1.7 ″, iyo inosvika 64MP Sony sensor yakakura zvishoma kupfuura iyo 1 / 1.72 ″ Samsung ISOCELL Bright GW1 sensor yatakaona pafoni senge iyo Realme X2 uye X2 Pro. Ose ma sensors anoshandisa madiki 0.8μm pamwe ne4-in-1 pixel binning inoguma ine 16MP shoti. Iwe unogona, zvakadaro, zvakare kutora 64MP mifananidzo mune zvese zviri zviviri. Iyo sensor yeSony inorukwa ine f / 1.9 yekushongedza lens.
Padivi peiyo 64MP yekutanga sensor, iyo POCO X2 ine 8MP yakagadziriswa-yakatarisa kamera ine 120º munda wekutarisa, 2MP macro kamera ine PDAF (chikamu-inoona autofocus), uye 2MP yakadzika sensor. Yese makamera aya akarongeka mumutsara mumwe pamwe nepakati peiyo smartphone uye mukati meguru kamera kamera. Yaviri-LED mwenje iri pasi pazasi kamera bump yakafashukira negirazi kumashure.
Ndakatora kamera yerwendo kune imwe yedombo rekare raDelhi kuti ndiyedze kuti zvinofamba sei uku ndichibvisa mwenje kubhaiza kubva kumagadzirirwo emabasa eArchaic. Kutanga nekamera yepuraimari, iyo Sony IMX686 inorarama kusvika kune zvinotarisirwa zvakagadziriswa neakafanorongerwa - iyo 48MP Sony IMX586 - iyo yakarova kamera sensor muna 2019 Kuwanda kweruzivo mumifananidzo ye 16MP inotorwa nekamera yekutanga inoshamisa. Nekubatsirwa kwe pixel binning, iyo kamera inobata huwandu hwakakwana hwechiedza mukati mekunze uye kunze. Uyezve, toni yemavara haina kwayakarerekera pasina kuwedzeredza - kusiyana nemafoni eRealme.
Sezvatakambotaura, iyo sensor yeSony inogonawo kutora mifananidzo painogadziriswa zvizere, kureva pa64MP. Iko kune yakatsaurwa 64MP modhiyo mu MIUI kamera app pane iyo POCO X2 iri padhuze nepikicha Mufananidzo. Mhedzisiro 64MP mifananidzo yakakura chaizvo, imwe neimwe inotora inenge 25MB yekuchengetedza. Mune rimwe parutivi nekuenzanisa, iyo mifananidzo ye 16MP inoratidzika kupinza zvakanyanya kupfuura iyo mifananidzo 64MP. Uyezve, iyo mifananidzo ye 16MP iri kuvhenekerwa zviri nani uye ine zvimwe zvinopesana. Manheru, iyo mifananidzo yakafanana chaizvo, uye iwe haungatarise chero mutsauko wakakura, kunyanya sezvo vese vachitambura nekushayikwa kwekujekeswa zvakaringana.
Iyo 64MP mifananidzo inotora yechipiri kana maviri kugadzirisa, uye izvi zvinoda kuti iwe uchengetedze foni yakasimba kwazvo kana unenge uchipwanya iwo mufananidzo zviri nyore. Kubatsira chete kunoonekwa kwekutora mifananidzo 64MP ndeyekuti inogona - kusvika pamwero wakati - izadza gadhi rakagadzirwa nekushaikwa kwetelphoto kamera.
POCO X2 kamera samples yakasimwa inosvika gumi muzana yefuremu; 10MP mifananidzo kuruboshwe uye 16MP mifananidzo kurudyi
Kana iwe ukadyara chikamu chidiki chemifananidzo uye uchifananidza navo-ne-padivi, iwe uchaona kuti iyo mifananidzo ye 16MP ine mimvuri yakajeka uye yakakwirira. Nekudaro, kana iwe uchiswededza padhuze zvakanyanya pane chimwe chinhu chiri kure nechinhu, unogona kuona nyore nyore kuti kupinza kubva pamifananidzo ye 16MP inoshanduka kuita ruzha. Kunyangwe iyo mifananidzo ye 64MP isiri crisp, ine ruzha zvishoma kurongeka.
Kuenderera kune yakaderera-mwenje kutora mafoto, iyo POCO X2's Night mode inoshandisa akawanda mapfuti pamatanho akasiyana ISO uye anovabaya pamwechete kuti vafanane nemufananidzo wakajeka, panzvimbo yekushandisa iyo nzira refu-yekuratidzira yekutora shoti dzeusiku. Iyo Night mode paPUKO X2 inokwidziridza iwo makuru pamifananidzo apo mimvuri inoramba iine-kana-shoma yakachengetedzwa. Mifananidzo ine Night mode ON iri, zvisinei, zvishoma zvine ruzha kupfuura pasina izvozvo.
Kuuya kune yakakura-kona kamera yePUKO X2, iyi seti inoratidzika yakafanana neRedmi K20 Pro (inozivikanwawo seXiaomi Mi 9T Pro). Iyo 8MP sensor yakapetwa ne f / 2.2 aperture lens, inoguma ichiita zvishoma kubhenekerwa kana ichienzaniswa nekamera yekutanga. Mukuenzanisa-ne-parutivi, iwe unogona kuona kuti iyo yakakura-kona kamera inodzvanya mifananidzo yakawanda yeRR-ish ine kupenya kwakadzikira kana ichienzaniswa nekamera yekutanga. Izvi zvinopa fungidziro yekuti mifananidzo ine zvakawanda zvakashongedzwa, asi zvazviri, iyi ingori nzira yekurarama nekuratidzwa kwevarombo. Huwandu hwemhedzisiro huri pachena hwakaderera ipo paine ruzha rwakanyanya sekuenzaniswa nekamera yekutanga. Mukati uye pasi pechiedza chakadzika, iyo mifananidzo-yakakomberedzwa yemakona inowanzova nekukanganisa kwakanyanya.
Iyo POCO X2 inowanawo 2MP macro kamera, inotsigira otomatiki, ichiibvumira kutora mifananidzo yecrisp yezvinhu zviri padyo kunge 2cm. Nepo iwo mavara asinga shamise seyakanyanya kamera, iro danho rezvakawanda rinoshamisa.
Iyo smartphone inoshandisawo 2MP kudzika sensor yekunyatso bata magumo epamberi kusiyanisa neiyo kumashure. Muchiitiko ichi chekushandisa, iyo POCO X2 inoita chaizvo mumamiriro ekunze uye mukati memukati.
Chekupedzisira, kune selfies, iyo POCO X2 inoratidza maviri makamera kumberi. Iyo kamera yekutanga kumberi inotora mifananidzo ye 20MP nepo kamera yechipiri iri 2MP yakadzika sensor yekunyatso kuona kumucheto. Iyo yekutanga selfie kamera inotora yakajeka kumeso echiso mu selfies, asi pane zvishoma ganda rekunyorova kunyangwe kana nzira yekushongedza yadzimwa. Kusiyana nekamera yekutanga, kamera yekumberi haitsigire pixel binning, asi kunyangwe zvakadaro, selfies inoshanduka kuve neakakwana mwenje. Uyezve, iyo kumucheto inoonekwa yakanakawo kwazvo, uye MIUI inobvumira zvimiro zvakaita sechibani kuvhenekera uye Ruvara pop kukwidziridza kumeso kana chinhu pamberi.
Kana zvasvika kune mavhidhiyo, iyo yekumusoro kamera yekutanga inotsigira 4K kurekodha asi chete kusvika ku30fps. Inoita, zvisinei, inobata 1080p vhidhiyo kusvika ku60fps. Kunze kwekamera yekutanga, iwe unogona zvakare kushandisa yakakura-pakona uye macro kamera kutora mavhidhiyo. Nepo mavhidhiyo emakona akapamhama pa 1080p pa 30fps, unogona zvakare kutora 720p mavhidhiyo pa30fps max uchishandisa macro kamera. POCO X2 inowanawo mamwe MIUI kamera maficha akadai anononoka-kufamba mavhidhiyo kusvika ku960fps nepo EIS zvakare ichitsigirwa yemavhidhiyo anotorwa neyekutanga uye yakafara makona kamera.
Zvese mune zvese, iyo 64MP quad-kamera setup kumashure uye mbiri mbiri kuseta kamera kumberi inoita kunge piraki inobatsira yevaifarira kutora mafoto. Izvo chete zvinogumisa kamera ino kushaya rutsigiro rwe 4K vhidhiyo kurekodha pa60fps. Isu tinotarisira kuona a Google Camera mod yePUKO X2 kuve inowanikwa munguva pfupi nekutsigirwa kwemamera ese.
Iyo POCO X2 yakarongedzerwa nebhateri re4500mAh iyo inogona kupfuurira nyore kuburikidza nezuva riine mwero inoda kushandiswa. Mune ruzivo rwangu, bhatiri rakagara nyore nyore maawa makumi maviri nemana nemasisitadhi e24HZ akaiswa. Muzviratidziro pazasi, unogona kuona kuti iyo POCO X120's bhatiri yakagara anenge maawa makumi matatu nemaawa 2 eSOT (skirini-nguva) uye anenge 30 maawa ane maawa manomwe eSOT. Izvo zvinoshamisa kune foni ine yakakura kuratidzwa sePUKO X5.5.
Iyo PoCO X2 inouya ne 27W charger iyo yakapihwa Qualcomm Quick Charge 3.0. Ndichiri kuvandazve neiyo 27W charger, iyo POCO X2 inongotora maminetsi makumi matanhatu nemashanu kuenda kubva ku65% kuenda ku10% nefoni yakadzimwa ON. Mukupesana, uchishandisa iyo 100W Xiaomi charger inopiwa pamwe chete neRedmi K18 yakatevedzana (kana POCO F20), rwendo kubva ku1% kuenda ku10% bhatiri rinotora anenge maminetsi zana.
Mukuenzanisa, Realme's 30W VOOC 4.0 charger inotora maminetsi makumi manomwe kuti izadze iyo Realme X70's 2mAh bhatiri kubva 4000% kusvika 10%. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe pakadzima simba kuburitsa, iyo POCO X100 inobhadharisa nekukurumidza kupfuura iyo Realme X2.
Iyo POCO X2 inouya neyakajairika nzira dzekubatanidza dzakadai seBlue 5.0, 802.11 a / b / g / n / ac Wi-Fi, uye LTE-Yepamberi, zvinoreva kuti runhare runotsigira kutakura kunosanganisa kune vanotsigira telecom vanoshanda. Kupfuurirazve, iyo POCO X2 inotsigira inotevera LTE mabhendi:
TDD: B40 / 41 (120MHz）
Sezvo POCO X2 ichingotengeswa muIndia, tsigiro yaro yebhendi reLTE inobvumidzwa zvakanaka. Uyezve, iyo smartphone inotsigira maviri maviri LTE yekusaina isina kati pakati peSIM makadhi yekubatanidza data pamwe chete neiyo mbiri VoLTE uye VoWiFi kutsigirwa kwe HD kudana.
Nezve chinzvimbo, iyo POCO X2 inotsigira GPS, GLONASS, uye BeiDou. Iyo Redmi K30 4G inowanawo rutsigiro rweGalileo, asi mamiriro aya ari kushomeka kubva kune peji yePOTCO X2. Kunyanya, foni haina mbiri-frequency chinzvimbo uye haitsigire India's NavIC chinzvimbo.
Panyaya yekubatana kwemuviri, iyo POCO X2 ine 3.5mm yemusoro musoro jack uye USB 2.0 Type-C doko. Ose ari maviri headphone jack uye USB-C doko anogona kushandiswa ekutamba odhiyo.
POCO X2 XDA Foramu, Bootloader Kuvhura, uye Tsika ROMs / Kernel Development
POCO F1 yakagamuchira huwandu hwakawandisa hwekutsigirwa kubva kunharaunda yevanogadzira paXDA, uye isu tinovimba izvo zvakafanana zvinogona kuitika kune PoCO X2. Kutanga, POCO yakavimbisa zuva-zero kernel source kuburitswa, zvinoreva kuti masosi e kernel achagadziridzwa newese patsva pazuva re kuburitswa. Kupfuurirazve, iyo yekumirira nguva yekuvhura iyo poco X2's bootloader zvakare iri maawa makumi manomwe nemaviri (mazuva matatu) zvinopesana neyakajairwa-72-awa yekumirira nguva kune mamwe maXiaomi zvishandiso.
POCO X2 XDA Foramu
Pamusoro peizvozvo, POCO zvakare kutumira POCO X2 zvikamu kune vanozivikanwa vanovandudza vagari vemunharaunda vanozoshandisa chishandiso ichi kuedza uye nekurongedza-tsika tsika dzemakonye, ​​tsika maROM, uye mamwe ma mods akaita seisingazivikanwe Google Kamera doko. Izvi zvinogona kuisa hwaro hwekutanga hwehutano hwakasimba hwekuvandudza ecosystem ye PoCO X2. Kana wagara varidzi POCO X2, iva nechokwadi kuti tarisa redu POCO X2 Forums. Iyo bootloader yefoni haigone kuvhurwa parizvino, asi POCO inotivimbisa kuti ichi chingori chenguva pfupi chavari kushanda kugadzirisa.
POCO X2: Kutamba korona yeminzwa
Tichitarisa pamutengo wayo, iyo kukosha kwayo iyo POCO X2 inopa inoenderana nemamwe madhivhisi mu Xiaomi ecosystem. Iyo POCO X2 inoshamisira iyo POCO F1 uye iri nani pane yekupedzisira mune imwe neimwe pfungwa neyakakura uye yakapfava kuratidza, yakagadziridzwa uye inowedzeredza kamera setup, kushanda zviri nani, bheji rakakura, uye zvichingodaro. Nekudaro, inomira ichibva pakuva mutsivi wechokwadi wePCA F1, uye kushomeka kweshoko rePOTF F2 kwaunza pfungwa yekusagutsikana pakati pevateveri vange vakamirira nemoyo murefu mumwe mufu-muurayi kubva kuPOTCO.
Iko hakuna vimbiso yakajeka yePOTCO F2, asi mhando inoronga kuburitsa mimwe michina yekutanga pamusoro pegore. Nekudaro, kusvikira iyo poco F2 ichivhura, iyo POCO X2 ichafananidzwa nePPCO F1 nguva uye nguva zvakare.
Mukuzviparadzanisa nePOKF F1, iyo POCO X2 chinhu chinobatsira kwazvo uye chimwe chezvisarudzo zvepamusoro mumutengo waro. Zvese zvinhu zvacho senge 64MP kamera, iyo 120Hz inoratidzwa, girazi dhizaini, bhatiri hombe ine 27W nekukurumidza kuchaja, uye sarudzo dzinosvika ku 8GB RAM uye 256GB yekuchengetedza inowedzera kumusoro kuti iite package yakakosha. Nenzira dzakawanda, iyo Snapdragon chipset inogonawo kukanganisa kutengesa kweRedmi Note 8 Pro. POCO ichaenderera ichisimudzira network yeXiaomi yekutengesa uye mushure mekutengesa kuti ikwanise kugovera nekushandira zvikamu zvePRCO X2 zvinobudirira
Chekupedzisira, iyo mikana yekuvandudzwa kwetsika yePUKO X2 inoita kuti iwedzere kunakidza kupfuura zvairi. Iwe unogona kutarisira kunzwa zvakawanda kubva kwatiri munguva pfupi nezve kuuya mods, tsika kudzorera, kernels, uye tsika ROM.
The post POCO X2 Ongorora: Wese Bit Zvirinani Kupfuura iyo POCO F1 yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Xiaomi Poco X3 NFC ongororo: Yakazara foni isina mari yakawanda